Halkan waxa aad ku arki qaar ka mid ah cabitaanka kafeega ugu fiican in aad ka heli kartaa oo ku saabsan suuqa maanta. At sare ee naga liiska waa Keurig ah, The Original joogto ah caagga Shop, Dhexdhexaad dheeraad ah Geesi, Baakad K-Cup, 72 tirin. Tani waa kafeega in leedahay dhadhan buuxa xoogga. Waxa kale oo ay dhadhan dhiirranaa oo leedahay dhadhan aad u fiican iyo weliba. Mid ka mid ah koob oo ah tan kafeega cabitaanka fiican cadayn doono inuu yahay runta ah Cinabka.
Keurig ayaa, Dhexdhexaad dheeraad ah Geesi
Keurig ayaa, Dhexdhexaad dheeraad ah Geesi, waa kafeega lagu dubay, oo dhexdhexaad ah uu soo haadaan si ay Kosher. Sida size count, ay timaado in lix kartoon, mid kasta oo ka mid ah taas oo uu leeyahay dersin baakad koob-K gebi laba iyo toddobaatan, baakad koob-K oo dhan. Haddii aad tahay qof jecel koobka Eebahood aroor kafeega ama xataa haddii aad keliya cabbo qaxwada u dabaal marmarsiinyo, aad doonaysid in aad cabitaanka kafeega this jecel.
The San Francisco Bay OneCup, 80 Single u adeegi bunka dhaf ah oo labada Dhexe iyo sidoo kale bunka South American. Kafeega Tani waxay kaa caawin doontaa in ay nadiifiso iska ceeryaanta subaxda. Kafeega waxay ii leedahay dhadhan buuxa xoogga iyo sidoo kale waa wanaag dheeli tiran. The San Francisco Bay OneCup sababtana fasiraad aan Brewer kasta Keurig K-Cup iyo sidoo kale wixii Brewer hal u adeegi socon. Si kastaba ha ahaatee, ma loo isticmaali karaa brewers doortay Keurig. Marka aad soo iibsato cabitaanka kafeega this aad doonaysid in aad si togan u saamayn nolosha kumanaan ka mid ah dadka ka shaqeeya beeraha ee qaybaha kala duwan ee adduunka. Waa maxay dheeraad ah, digirta Arabica kafeega loo isticmaalo in cabitaanka kafeega tan u fiican in aad ka heli karto. Arrinta gunteedu waa in cabitaanka kafeega tani ma aha oo kaliya weyn oo ay cabbaan, laakiin sidoo kale waxaa la soo baakadeeyey ee baakada baaba'aysa. Hadda, marka aad ku raaxaysato aad u adeegtaan kafeega hal aad sidaas u samayn kartaa adigoon dareemayn denbi in aad ka qeyb qaadatay wasakhda.
Pack Coffee duwan Sampler
Marka aad ka iibsan duwan Coffee ah Sampler santuuq aad doonaysid in aad sanduuqan kafeega u jeclaataa sidaad u siinayaa koob oo kala duwan oo maalin kasta kafeega. Waxaad ka duwan in ka badan siddeed iyo toban magac heli afartan u adeegi koob hal kala duwan ee kafeega dhanan. Qaybta ugu fiican waa in aad marnaba heli Dhuxul nuqul. Waxaad isticmaali kartaa cabitaanka kafeega la Brewer kasta oo jaanqaadi Keurig K-koobka. Marka iibin, waxaad ka heli si ay u iibsadaan noocyada kala duwan ee ay ka mid yihiin kuwa sida Crazy Cups iyo Eko Cups iyo sidoo kale qaar ka mid ah magac kale oo xiiso leh.
Nespresso duwan Pack KAABSUL
The Nespresso duwan Pack KAABSUL waa qaxwaha cabitaanka ugu fiican ee qof kasta oo la shaqeeya daahay ama kaasoo ilaa baranaya imtixaan socda. Kafeega waxa uu ku siinayaa khibrad kama dambaysta ah oo caawin doona in aad soo jeedo oo uu diirada saarayo saacado badani aan u baahan in laga welwelo in aad doonaysid in aad dareentid daal iyo caajis ama saamayn kooxda. Sanduuqa kastaa waxay ka kooban toban kaabsoosha kasta u dhadhan ah oo kala duwan. Waxaa kale oo lagu dhegeysan karo nooc kasta oo ka mid ah makiinadda Nespresso oo waa mid aad u sahlan in ay isticmaalaan khamriga kafeega celcelis.